U-Beyoncé uyaziqhenya ngamafomu akhe: wafunda ukuthi ungakwenza kanjani - iTELE RELAY
IBrexit: iyaphi indawo elandelayo yama-IPO ase-Afrika? - ...
Phatha i-sinusitis ngemizuzu ngezithako ezivela…
Ukubulawa Kwama-Rapper Pop Kuboshelwe Ukuthwala Ngokucashile…
Eminyakeni ye-38, uBeyoncé usefeze okuningi. Impumelelo ayikaze iyehlise, wasungula umndeni wakhe omncane nomyeni wakhe uJay-Z, waze waqalisa brand yakhe yezingubo, Ivy Park. Ngokubukeka, umculi ubonakala ehola impilo yamaphupho. Kepha eqinisweni, akuhlali kuyinto enhle kakhulu, njengoba eshilo kukholamu yomagazini IT ngesikhathi senhlolokhono lapho azembule khona kakhulu kunangaphambili. "Nginobuhlungu obufanayo obulethwa yimpilo komunye nomunye wethu"kusho yena. Isibonelo, ukhulume ngokukhubazeka kwakhe noma ngokugxeka okuningi aqondiswe kukho.
Impela, ngaso sonke isikhathi ngaphansi kokubekwa obala, UBeyoncé akabaleki "abazondayo" abamhlasele emzimbeni wakhe. Uma evuma ukuthi ukuphawula okuthile kwesinye isikhathi kungamthinta, ikakhulukazi "Ngezikhathi zobungozi"uzama ukuyeka ukunaka. Noma ngabe baningi kakhulu selokhu kwazalwa izingane zakhe ezintathu, Blue Ivy, Rumi kanye Carter. Ngoba usethole isisindo.
UBeyoncé: uthanda amakhethini akhe
Izimo zakhe ezintsha, umhumushi we Uhlanyiswa uthando bazithathe ngokugcwele. Futhi akasabazi ukuyiveza ezinkundleni zokuxhumana. "Ukube umuntu ubengitshele eminyakeni engu-15 eyedlule ukuthi umzimba wami uzoba nezinguquko eziningi kakhulu futhi ngizozizwa ngingowesifazane futhi ngiphephe kakhulu ngamajika ami, ngabe angizange ngikholwe", kuvuma umholi wangaphambili we Ingane kaDepiny.
Lesi sifiso sokuthanda savela ngokwemvelo, ngemuva kokuzalwa kwezingane zakhe ezintathu. Futhi ngiyabonga, uthi, kancane "Ukukhula". "Kungifundise ukuzazisa ngaphezu kwendlela ebukeka ngayo"uyachaza. uma Beyoncé ineseluleko kuwe, lokhu kungaba ukuzama ukubona "Qiniso" ubuhle: "Ngifuna abantu abaningi ukuthi bagxile ekutholeni ubuhle ngokwabo kunokugxeka abanye".
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Beyoncé (@beyonce) on Dec 9, 2019 ku-4: 01am PST
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Beyoncé (@beyonce) on I-Nov 16, i-2019 ku-12: 35pm PST
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.closermag.fr/people/beyonce-fiere-de-ses-formes-elle-a-appris-a-s-accepter-en-devenant-maman-1058791
TELES RELAY 11717 izikhala 0 amazwana
IBrexit: iyaphi indawo elandelayo yama-IPO ase-Afrika? - JeuneAfrique.com
Phatha i-sinusitis ngemizuzu ngezithako ezivela ekhishini lakho -…
Kuboshwe uRapper Pop Smoke ngezinsolo zokuhambisa iRoll Royce eyebiwe…
Thola i-vacuum ye-robot ye-premium ngama- $ 128 kuphela namhlanje ...
USamuel Le Bihan uqhutshwa okuningi
I-Avocado ingumuthi wemvelo: Izizathu eziyi-10 zokuyidla ngokushesha…
Nweba isikhathi sakho sokuphila ngokuzila ukudla
Isiqondisi sokwelusa unyaka omusha ophumelelayo
ULorie ku- "Izwi"? - IVIDEO
UMessi uwina iGolden Ball yakhe yesithupha futhi ungena emlandweni…
E-India: Umbiko we-UNDP: ukwanda kokubandlulula ku…
Abadlwenguli abane badutshulwa ngamaphoyisa ngemuva kokubayisa e ...
Isimenywa seRTL Petit Matin sikaJanuwari 03, 2020 - VIDEO